उत्तम अर्गानिक फलफूलहरू, अर्गानिकमा के हुन्छ ? के फाइदा हुन्छ ? – Khabar Patrika Np
उत्तम अर्गानिक फलफूलहरू, अर्गानिकमा के हुन्छ ? के फाइदा हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: २३:०१:२४
बीसौं शताब्दीसम्म संसारका सबै बालीहरू अर्गानिक थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र किसानहरूले सिन्थेटिक कीटनाशक विषादी र रसायनको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । त्यसपछि अर्गानिक खेती आज भएजस्तो बजारीकरणमा परिवर्तन भएको हो । आधुनिक युगको खेतीले बाली कायम राख्न र खेतबारीका जनावरलाई स्वस्थ राख्नका लागि मिसिएको रसायन प्रयोग गर्छन् ।
दुर्भाग्यवश, यी रसायनहरूले पानी, वायु र माटोलाई विषयुक्त बनाएका छन् । अनावश्यक र उपयोगी नहुने जीवलाई मार्नका लागि प्रयोग हुने कीटनाशक, स्टेरोइड, हर्मोन, एन्टिबायोटिक र हर्बिसाइडहरू हामीले खाने खानामा पनि रहने गरेका छन् । यस्ता रसायनले हामीलाई क्यान्सरजस्ता रोग उत्पन्न गराउँछन् । यस्तै कारणले पनि अर्गानिक खानेकुराहरू पुनः चर्चित हुँदै गइरहेका छन् ।
अर्गानिकमा के हुन्छ ?
अर्गानिक हुनका लागि अर्गानिक बालीले संयुक्त राज्यको कृषि विभागले कायम गरेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। यी मापदण्डमा सबै बालीहरू सिन्थेटिक कीटनाशक, कृत्रिम मल, विकिरण र बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ ।
केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले अर्गानिक तरिकाले उब्जाइएका अन्न र पशुहरू रसायन भएका बाली वा मासुभन्दा राम्रो उत्पादन हुने विश्वास गर्छन्। केही खानेकुराहरू अर्गानिक रूपमा किन्नुपर्दैन तर अरूका लागि भने तपाईंले अर्गानिक चिह्न लागेको खोज्नुपर्छ । यी उत्पादनहरूमा उच्च मात्रामा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छ
स्याउ, अंगुर, स्टबेरी, आरु, साग, चेरी टमाटरहरू, आलु, आयातित केराउहरू, काँक्रो, गुलियो र पीरो मरिचहरू
यी उत्पादनहरूमा उच्च मात्रामा रसायन हुने भएकाले तपाईंले अर्गानिक हिसावले उत्पादन गरिएका बालीहरू किन्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, यी फलफूल र तरकारीमा निकै कम मात्रामा कीटनाशक विषादी र रसायन हुन्छन् ।
अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल, तरकारी र मासुहरू पोषिलो हुने मात्र होइन, रसायनको कमीले गर्दा राम्रो गुणस्तरका पनि हुन्छन्। विभिन्न खाले हर्मोन र एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरी हुर्काइएका पशुहरू अर्गानिक हिसाबले खुला रूपमा हुर्काइएका पशुहरूको तुलनामा धेरै तनावमा हुन्छन् । यसले मासुको गुणस्तरमा पनि निकै फरक पार्न सक्छ। यही कुरा अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल र तरकारीमा पनि लागू हुन्छ।
अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल, तरकारी र मासुजन्य उत्पादन वातावरणमैत्री पनि हुन्छन् किनभने ती खानेकुरा उत्पादन गर्न र वृद्धि गराउनका लागि कुनै पनि रसायनको प्रयोग गरिएको हुँदैन। कीटनाशक विषादी, हर्बिसाइड्स, र हर्मोनहरूले कृषि र वातावरणजन्य नोक्सानी हुने गरी नदी, माटो र हावालाई दूषित बनाउन सक्छन् ।
हामीले याहाँ सम्बन्धित जानकारी दिइएका छाै
बिहान नास्ता गर्नु के वास्तव मै फाइदाजक हुन्छ त ?
स्वास्थ्यवर्द्धक भनिएका कुराहरु पनि समय र अवस्थाको ख्याल नगरी खाएका उल्टै स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँने हुन सक्छन् । भनाई नै छ, मह पनि बढि खाए तितो हुन्छ । यो त भयो मात्रामा होस पुर्याउँनु पर्ने कुरा । त्यस्तै गरि मात्रासँगै समय र अवस्थाको पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यहाँ हामीले त्यस्तै खानेकुराहरुको सूचि बनाएका छौँ जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाकारी नै छन् तर समयको सम्बन्धमा होस नपुर्याए स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछन् । यसैले तपाईले पनि यी खानेकुराहरु खाली पेटमा खाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बानीमा सुधार गरेर आफ्नो स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँन सक्नु हुनेछ ।